Deenmark: Toddobaatan iyo afar qof oo soomaali ah oo sharciga lagala noqday | Somaliska
Deenmark: Toddobaatan iyo afar qof oo soomaali ah oo sharciga lagala noqday
Iyadoo dalkaasi Deenmark sanadkii ina dhaafay shaaca ka qaaday in dad gaaraya 800 oo soomaali ah dib u qiimey lugu sameeyn doono daganaanshahooda sharci.
Ayaa hadana waxaa jirara warar sheegay in toddobaatan iyo afar ruux oo ka mid ah dadkii dib u qiimeeynta lugu sameeyey lagala noqday sharciga dalkaasi. Halka labbo ka mid ahina lugu amray ineey iskaga baxaan Deenmark oo gebi ahaanba loo diiday in loo cusbooneeysiiyo sharciyadii ay horey u heeysteen. wargeysyadda dalkaasii oo mudooyinkan dambe aad isha ugu hayey ayaa amuurtan wax ka qoray gaar ahaan wargeyska lugu magacaabo Berlingske.
Horey waxaa u jiray warar aan la xaqiijin oo sheegayey in dowladii hore ee Soomaaliya ay heshiis la gashay maamulka Kobanhagen si dadka ay u diiday sharciyada dib ugu loogu celiyo Soomaaliya. Hase ahaatee safiirka Soomaaliya u fadhiya Midowga Yurub Cali Saciid Fiqi oo u waramayey wargeyskaas ayaa sheegay in aaneey jirin qorshe iyo heshiis dowladda Soomaaliya saxiixday oo dib loogu celinayo qaxootiga soomaalida lagala noqodo sharciyada.
Deenmark iyo Noorweey ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa ay bilaabeen nidaamyo cusub iyo waxa ay ku sheegeen dib u qiimeeyn lugu sameeyo shaqsiyaad soomaali ah oo ay qaarkood sheegeen inaaneey xaq u laheyn in dalalkaasi deganaansho ku heeystaan. Labadda dowladood ayaa dad kor u dhaafay kun qof dib u eegis ku sameeyey degenaanshahooda halka shaqsiyaad kalena si qasab ah dib loogu celiyey Soomaaliya.
Xisbiga KD: “Silsiladdo koranteeysan ha lugu xiro kuwa sharciyadda loo diido si eeysan u dhuumaaleeysan”
Ma isbedashaa lahjada Soomaalida inta ay qurbaha joogaan?
Qaab cusub oo lagu baarayo da’da magangalyo doonka
100% waxa aad qortaan waa wax kasoo qaadateen norsomnews..Waayadii hore idinka ayaa ugu fiicnaa, laakiin hada waxaad noqoteen fadhiid iyo copy socdo.